Henry Rabary-Njaka : “Singa iray amin’ny fampandrosoana ny fampianarana” -
AccueilRaharaham-pirenenaHenry Rabary-Njaka : “Singa iray amin’ny fampandrosoana ny fampianarana”
04/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mitohy, ary efa tafapetraka ny fiaraha-miasan’i Madagasikara amin’ireo firenena vahiny sy ireo fikambanana iraisam-pirenena. Araka izany sy araka ny efa fantatra, dia mandray anjara amin’ny Fihaonamben’ny Unesco andiany faha-39 any Paris, Frantsa, i Madagasikara amin’ny alalan’ny delegasiona malagasy tarihin’ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier.
Noho izany, niaka-tsehatra nandray fitenenana ho an’i Madagasikara nandritra ity Fihaonamben’ny Unesco ity, ny alakamisy 2 novambra teo, ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Henry Rabary-Njaka. Nandritra izany fandraisam-pitenenana izany, dia teboka maro no noresahiny sy novelabelariny, izay tafiditra amin’ny fanatrarana ny tanjona amin’ny fampandrosoana maharitra (ODD) ao anatin’ny Drafi-pirenena momba ny Fampandrosoana, na ny PND. Saingy, nosinganiny sy nasongadiny manokana, ary notsindriany mafy ny tontolon’ny fampianarana. Araka izany, nanambara ity laharana voalohan’ny diplaomasia malagasy ity fa “singa iray amin’ny dingan’ny fampandrosoana ny fampianarana”.
Noho ny fanohanan’ny Unesco, niroso tamin’ny fanatsarana sy fanavaozana ny tontolon’ny fampianarana ny governemanta malagasy. Anisan’ny laharam-pahamehan’ny fitondram-panjakana ho amin’ny fampandrosoana rahateo ny tontolon’ny fampianarana eto Madagasikara. Io fanavaozana io dia mitondra amin’ny fametrahana ny tetikasa vaovao eo amin’ny sehatry ny fampianarana, izay niarahan’ireo minisitera telo (minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, minisiteran’ny Fampiofanana arak’asa, minisiteran’ny Fampianarana Ambony). Nambaran’ny minisitry ny Raharaham-bahiny fa i Madagasikara dia efa an-dalam-pametrahana ny fomba fampianarana matanjaka sy mifandanja, ary ho an’ny rehetra.
Anisan’ny fiaraha-miasa tamin’ny Unesco, ohatra, ny fanomezana fampiofanana ireo mpampianatra miisa 2 300 sy ny fandaharan’asa Camel izay notohanan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
Tombony ho an’i Madagasikara ny fandraisana anjara tamin’iny Fihaonamben’ny Unesco andiany faha-39 iny izay nahafahana nanamafy ny fiaraha-miasa amin’ny Unesco sy ny fifandraisana amin’ireo firenena mpikambana.
Andry Rajoelina : Vola avy aiza?
Tsy neken’ny MAPAR sy ny TIM hatramin’ny farany ilay lalàna mifehy ny fifidianana nolanian’ny solombavambahoaka maro an’isa izay notsipahan’ny HCC rehefa tonga teo am-baravarana ny fampihorohoroana sy ny fandrahonan’ny mpanohitra… Efa manao propagandy mialohan’ny fotoana ...Tohiny
Governemanta MAPAR : Manomboka ny fampihorohoroana
Tale jeneralin’ny Bianco : Mpanao kolikoly ?
Lany ny volavolan-dalàna:ONERANA IREO OLONA VOA HATRAMIN’NY 2002